Ronaldinho Oo Kabaha La Dul-maray PSG: "Waxaad Haysataan Ciyaartooyo Wanaagsan, Haddana Waxaad Doonaysaan ...." - GOOL24.NET
Ronaldinho Oo Kabaha La Dul-maray PSG: “Waxaad Haysataan Ciyaartooyo Wanaagsan, Haddana Waxaad Doonaysaan ….”
Halyeyga Brazil ee Ronaldinho ayaa weerar ku qaaday kooxdiisii hore ee Paris Saint-Germain, waxaana uu diiday in kooxdaas lagu sameeyo wax isbeddelo ah maadaama ay haysato ciyaartooyo waaweyn.
Ronaldinho ma rumaysna in PSG ay u baahan tahay in lagu sameeyo isbeddelo waaweyn maadaama ay wareeggii 16ka kaga hadhay tartanka Champions League, waxaana uu u sheegay, in ay u baahan yihiin in waqti ay iskula qabsadaan la siiyo ciyaartoyda cusub ee kooxda, si ay ula jaan-qaadaan hannaanka iyo qaab-ciyaareedka kooxda.
Waraysi uu siiyey telefishanka Faransiiska ah ee RMC ayuu ku yidhi: “Ma waxaad doonaysaan inaad wax walba beddeshaan? Maxaad doonaysaan markaa? Ma waxa aad rabtaan ciyaartoyga ugu liita dunida?
“Waa in aad sugtaan inta ay ciyaartoyda cusub fahmayaan nolosha cusub ee Paris iyo qaab-ciyaareedka kooxda. Markaas ayay wax walba si qunyar-qunyar ah u soconayaan. Laqabsigu waa caadi si wax walba u hagaagaan.
“Neymar waxa uu ka mid yahay ciyaartoyda ugu wanaagsan dunida, waxaase sannadkan soo gaadhay dhaawacyo badan. Marka uu 100% taam noqdo, waa ciyaartoy cajiib ah oo caawinaya kooxda.
“Neymar, Angel Di Maria, Lionel Messi…. Ciyaartoydiii ugu wanaagsanaa ayaa wada jooga kooxda, haddii aydaan ku faraxsanayn iyaga, yaad doonaysaan in aad ciyaaarsiisaan.”
Ronaldinho waxa kale oo uu ka hadlay finalka Champions League ee Real Madrid iyo Liverpool, isaga oo caddeeyey kooxda uu taageerayo, waxaanu yidhi: “Waa laba kooxood oo wanaagsan.
“Waxay haystaan ciyaaartooyo fiican. Wanaag ayaan labadoodaba u rajaynayaa, laakiin Real Madrid ayaa aad u fiican. Shaqo fiican ayay qabteen, laakiin maadaama aan in badan jecelahay Barcelona, waxa aan taageerayaa Liverpool.”
Waxa kale oo uu Ronaldinho ka hadlay mustaqbalka Kylian Mbappe oo dhamaadka xilli ciyaareedkan uu ku egyahay qandaraaska uu kula jiro PSG, waxaanu yidhi: “In badan ayaan jecelahay isaga, waxa ugu muhiimsana waa in uu faraxsan yahay waxa kale oo dhana caadi ayay iska noqonayaan. Waxa uu noqon doonaa ciyaartoyga ugu wanaagsan dunida, isaga ayaanay u taallaa go’aanka uu ka qaadanayo halka uu ka ciyaari doono iyo waxa uu doonayo inuu sameeyo.”
Ronaldinho waxa kale oo uu taageero u muujiyey Karim Benzema oo uu u saadaaliyey in uu ku guuleysto abaal-marinta xiddiga sannadka ee Ballon d’Or.